Sidee loo rakibaa Telegram-ka Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Sidee loo rakibaa Telegram-ka Linux?
Rasmiga Telegram waa codsi fariin deg deg ah diiradda saaraysa dirista iyo helitaanka farriimaha qoraalka ah iyo kuwa badan. Markii hore adeegga waxaa loo adeegsaday taleefannada gacanta iyo sannadka ku xigay ee loogu talagalay isku-ballaadhinta diyaar u ah in ka badan 10 nidaamyada hawlgalka: Android, iOS, macOS, Windows, GNU / Linux, Firefox OS, daalacashada shabakadaha, iyo kuwo kale.
inta u dhaxaysa astaamaha ugu waaweyn waxaan iftiimin karnaa martigelinta waxyaabaha taariikhiga ah isku dhafan, 6 iyo kartida lagu keydin karo waxyaabaha ku jira wada hadalka, faylasha illaa 1.5 GB, oo ay ku jiraan dukumiintiyada, multimedia iyo animations graphic, raadinta waxyaabaha caalamiga ah, buugga xiriirka, wicitaanada, kanaalada la baahiyo, supergroups, iyo kuwo kale.
telegraam ku isticmaal kaabayaashaada farsamada MTProto. Marka lagu daro astaamaha aasaasiga ah, waxay soo bandhigeysaa barta bot ee lagu daro sameynta wada sheekeysiga caqliga leh waxayna sameyn kartaa adeegyo kale waxayna ku kabi kartaa khibrada wada hadalka.
Si loo rakibo Telegram-ka Linux waxaan haysannaa dhowr habab oo rakibo oo fudud oo aan ugu raaxeysan karno dalabka raaxada desktop-keena.
1 Sidee loo rakibaa Telegram on Ubuntu 18.04 iyo derivatives?
2 Sidee loo rakibaa Telegram on Debian Sid?
3 Sidee loo rakibaa Telegram Telefoon Fedora 28 iyo waxyaabaha la mid ah?
4 Sidee loo rakibaa Telegramka Arch Linux iyo waxyaabaha la midka ah?
5 Sidee loo rakibaa Telegram-ka SNAP?
6 Sidee loo rakibaa Telegram-ka Flatpak?
7 Sidee looga tirtiraa Telegram-ka Linux?
Sidee loo rakibaa Telegram on Ubuntu 18.04 iyo derivatives?
Rasmi ahaan ma jiro wax codsi ah oo Telegram ah oo ku dhex jira bakhaarrada Ubuntu maaddaama ay horumariyeyaasheeda Telegram ay doorbidayaan inay si fudud u bixiyaan feyl fayl guud ah.
Taasi waa sababta waxaan taageeri doonnaa meel lagu keydiyo dhinac saddexaad si loo rakibo arjiga. Waa inaan furnaa terminal oo aan fulino amarka soo socda:
Tan ayaa hadda la sameeyay waxaan cusbooneysiinnaa bakhaarada oo ku rakibnaa arjiga:
Sidee loo rakibaa Telegram on Debian Sid?
Kaliya qaabkan Debian waxaan haynaa arjiga ku jira bakhaarrada rasmiga ah, oo loogu talagalay rakibidda oo keliya waa inaan ku fulinaa boosteejada:
Laakiin maxaa dhacaya noocyada hore, ha ka welwelin waxaan ku rakibi karnaa Telegram-ka Snap iyo Flatpak hoosta waxaan la wadaagayaa amarrada loogu talagalay.
Sidee loo rakibaa Telegram Telefoon Fedora 28 iyo waxyaabaha la mid ah?
Arinta ah Fedora iyo noocyadeeda, waanu rakibi karnaa codsigan con RPMFusion caawimaad keydinta, taas oo lagama maarmaan u ah inaad ku rakibtay oo aad u karisay nidaamkaaga.
Si loo rakibo kaliya socodso amarka soo socda:
Sidee loo rakibaa Telegramka Arch Linux iyo waxyaabaha la midka ah?
Wixii kiiska Arch Linux, waxaan leenahay labo xirmo gudahae Meelaha AUR telegram-desktop-bin iyo xirmada telegram-desktop-git, asal ahaan midkoodna waad heleysaa arjiga.
In kastoo lagu taliyay waa weelka qashinka maadaama had iyo jeer ay si toos ah uga qaadaneyso nooca ugu dambeeya xirmada ay soo bandhigaan horumariyeyaasha Telegram, marka lagu daro haddii aad isku daydo inaad soo uruuriso git-ga waxaad wax badan ka taaban doontaa aragtidayda.
Ku rakibidaada waxaad u baahan tahay inaad rakibtid Yori nidaamkaaga iyo kaliya waa inaad fulisaa amarka soo socda:
Sidee loo rakibaa Telegram-ka SNAP?
Inta soo hartay qeybinta iyo xitaa kuwa kor ku xusan Waxaan ku rakibi karnaa arjiga xirmadaWaxaan kaliya ku qasbanaaneynaa inaan farsamadan ku shaqeyno nidaamkeena.
Hadda waa inaan furnaa terminal oo aan orodnaa amarka soo socda:
Sidee loo rakibaa Telegram-ka Flatpak?
Haddii aadan jeclayn Snap ama aadan awood u lahayn, waxaad ku raaxeysan kartaa Telegram kombiyuutarkaaga oo rakibay arjiga iyadoo la kaashanayo Flatpak, si la mid ah waa inaad haysataa teknoolojiyaddan nidaamkaaga.
El rakibi amar waa kan:
Sidee looga tirtiraa Telegram-ka Linux?
Haddii aad rabto inaad ka saarto arjiga nidaamkaaga, waad ku samayn kartaa adoo adeegsanaya amarka ka saarista softiweerka Nidaamka xirmadaada, haddii aad mid ka mid ah hababka rakibidda halkan ka isticmaashay, Waxaan la wadaagayaa amarrada si aan Telegram uga saaro kombuyuutarkaaga:
Marka laga hadlayo Debian:
Haddii aad ku rakibtay Snap:
Wixii loo yaqaan 'Arch Linux' iyo noocyo kala duwan oo aan ku baabi'inayno:
Xaaladda Fedora waxaad ka tirtiri kartaa:
Haddii aad ku rakibtay barnaamijka Flatpak:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Sidee loo rakibaa Telegram-ka Linux?
Ma jirtaa kanaal loogu talagalay boggan ku yaal Telegram?
Tan iyo markii Ubuntu loo yaqaan '17.10' waxaa jira xirmo rasmi ah oo ku jirta meelaha wax lagu keydiyo:
Wuxuu tan iigu adeegay laga soo bilaabo terminal-ka ee Peppermint 10, oo si sax ah u shaqeeya, salaan!
Xirmada telegram-desktop-ka waxaa lagu heli karaa keydka rasmiga ah ee Linux Mint, laakiin waa mid waqtigiisu dhacay. Waxaan u baahanahay inaan ku rakibo nuuca ugu dambeeya nidaamka, halkii ay ka noqon laheyd binary-ka fudud ee ay ku siinayaan bogga Telegram
Jawaab Kevin Figueroa
LibreOffice 6.0.4 ayaa hadda la heli karaa iyada oo in ka badan 88 la hagaajiyay
Nooca cusub ee Voyager 18.04 GS LTS horay ayaa loo sii daayay